Weerarada ku saleysan Aanooyinka Qabiil oo ku sii kordhaya Caabudwaaq iyo Nawaaxigeeda | Baydhabo Online
Weerarada ku saleysan Aanooyinka Qabiil oo ku sii kordhaya Caabudwaaq iyo Nawaaxigeeda
Iyadoo maalmihii u dambeeyay ay isi soo tarayeen Dilal iyo dagaallo la xiriira aanooyin Qabiil oo ka taagnaa degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ayaa saaka xiisad hor leh halkaas laga soo sheegayaa.
Guddoomiyaha deegaanka Dhabad ee Gobolka Galgaduud Aadan Cabdinuur Galaal ayaa sheegay in ay soo kordhayaan dilalka aanooyinka Qabiil oo Maleeshiyaad beelo walaalo ah ka soo kala jeeda isugu geysanayaan degmada Caabudwaaq iyo deegaanada ku xeerad ee Dhabad ay ka mid tahay.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in weeraradani aanooyinka Qabiil ay sababaan dhibaatooyin Dhimasho iyo Dhaawacba isugu jira.
Waxaana Guddoomiyuhu ku eedeeyay in Maamulka Galmudug aanu wax xil ah iska saarin dhibaatooyinkaan colaadeed ee ku soo noq noqday deegaanada ku dhow dhow degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.
Ugu dambeyn ayuu Guddoomiyaha Dhabad ee hoostaga degmada Caabudwaaq Aadan Cabdinuur Galaal waxa uu ku amaanay Shacabka iyo Culimada Degmada Caabudwaaq in ay aalaaba si iskood ah isugu xil qaamaan wax ka qabashada dhiilooyinkaasi Colaadeed.